Inona no hatao aorian'ny fametrahana Linux Mint 17 Qiana | Avy amin'ny Linux
Navoaka vao haingana ny Linux Mint 17 ary nahitana fahombiazana lehibe. Io no kinova farany misy amin'ny fanohanana maharitra (LTS) izay mitondra fanatsarana isan-karazany sy fisehoan-javatra vaovao hahatonga ny traikefan'ny biraontsika ho mahafinaritra kokoa, izay manazava ny antony mahatonga ny mpampiasa bebe kokoa amin'ity fizarana ity hahafantatra ny fomba hanesorana an'i Ubuntu ary handray lalana hafa . vaovao farany ny an'ny torolàlana aorian'ny fametrahana azy hanampiana ireo mpampiasa vaovao amin'ny Linux.
Amin'ny taonan'ny "rahona" dia mety manana kaonty Dropbox ianao. Azonao atao ny mametraka Dropbox avy amin'ny Program Manager. Raha tsy izany, azonao atao ny mametraka azy amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity: sudo apt-mahazo mametraka dropbox.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Inona no hatao aorian'ny fametrahana Linux Mint 17 Qiana
juansantiago dia hoy izy:
Salama, novakiako tamin'ny lahatsoratra sasany fa ny mint 17 dia miaraka amin'ny mate 18 noho izany ny fanitsiana mandeha ho azy ny windows (izay manamboatra rehefa manova azy ireo dia manova ny habeny sy ny toerany ho azy ireo, satria nanandrana an'ity tamin'ny distro sy birao hafa ex: manjaro miaraka amin'i lxde, Tsy dia tiako loatra ity, misy mahalala ny fomba hamonoana azy? Hiezaka ny minisitra matevina 17 aho izao amin'ny solosaina finday ary raha tahirinao aho izao hahafantatra tsara, raha tsy izany dia holazaiko anao ny fomba nanao ve 🙂
Mamaly an'i juansantiago
Mahita torolàlana mitovy amin'izany ao amin'ny bilaogiko ihany koa aho, rehefa avy nametraka ny linux mint 17 aho, tsy nahalala antsipirihany vitsivitsy tonga teto fotsiny aho ... arahaba
AqaIb8 dia hoy izy:
Torolàlana tsara ho an'ireo vao teraka, misaotra an'i Pablo.
Manitsy lesoka aho:
«Mety ho lesoka fiankinan-doha. Raha izany dia ampidiro fotsiny ity baiko manaraka ity mba tsy hiraharaha azy ireo:
Raha ny tokony ho izy, ny lesoka fiankinan-doha dia tsy raharahian'ity baiko ity fa manamboatra 🙂
Valio amin'i AqaIb8
Marina ny anao! Nahitsy. Misaotra anao!
arahaba indray, azonao atao koa ny manampy safidy mpilalao mozika, ankoatran'ireo tonga tampoka,
Toy ny clementine:
ary koa ny amarok:
Izay ny tsiron'ny tsirairay fa mpilalao mahay be ry zareo ... arahaba
Salama, fangatahana iray, ahoana no ahafahako mamono ilay topimaso mozika? Avelao aho hanazava: Isaky ny manidina amin'ny rakitra mp3 aho dia mandeha.
Mahasosotra ahy izany ary hatreto dia mbola tsy nahita fomba hanafoanana azy aho, raha tsy izany dia tena tiako ny Linux Mint. Raha misy afaka manampy dia tiako izany.
Heveriko fa manana ny birao Gnome ianao, tsy dia nampiasaiko hatry ny ela io, saingy angamba mety hanampy anao ity: http://www.ubuntu-es.org/node/12916#.U5ECo67gIbI
Ho an'ity karazana fanontaniana ity .. .. mandehana mankany amin'ny forum .. izay ahafahanay manampy anao mora kokoa .. .. arahaba ..
Rafa Huete dia hoy izy:
Salama daholo. Nampiasa Mint nandritra ny taona maro aho, nanandrana distro hafa, ary amin'ny farany dia miverina amin'ny Linux Mint foana aho.
Manana fanontaniana aho, ary tiako ho fantatra raha misy aminareo afaka manampy ahy. Ity manaraka ity ny lohahevitra; Nandritra ny andro maromaro, misy fonosana ambaratonga 5 miseho mena ao amin'ny mpitantana fanavaozana, manondro ny kernel izy ireo. linux-header 3.13.0-24 / linux-image-extra3.13.0.24 generic…. sns toy izany indrindra. Ny fanontaniako dia hoe, tokony hanavao azy ireo ve aho, na hamela azy ireo ho 5.
Misaotra betsaka antsika rehetra. Tiako ity bilaogy ity.
Valiny tamin'i Rafa Huete
Efa ela no nijanona ny Comix (2009), nanoro hevitra ny forkony MComix aho: http://sourceforge.net/p/mcomix/wiki/Home/ , ary koa ao amin'ny tahiry Mint: http://community.linuxmint.com/software/view/mcomix .
OKAY. Misaotra tamin'ny data! Nohavaozina! 🙂
"EQUALIZER" ampiasaiko Audacious, efa tonga miaraka amin'ny equalizer azy ary tena mandaitra izy, tsy mila apetaho ny equalizer-n'ny pulseaudio 🙂
Ny manohy miteraka ahiahy amin'ny biraon'ny MATE dia ny fanjifana cpu avo indrindra. Ohatra, miaraka amin'ny htop avy amin'ny console dia asehony ahy hatrany ireo fotony 2 mandany eo anelanelan'ny 70% sy mihoatra ny 90% ny CPU. Hafahafa izany. mbola ilay birao tsara tarehy sy tsotra indrindra, araka ny itiavako azy, ary tena mailaka tokoa.
Rahoviana ianao no hanamboatra io menio io mba ho haingana kokoa? Fantatro fa tsy ny hisintona ny volonao izany fa ny antsipiriany
Ampiasao ny paoka fotsy ... na zavatra toa izany ... dia ho hitanao ny fomba fiasan'ny zavatra sasany haingana kokoa. sokafy ny menio ao anatin'ny iray segondra, aorian'ny fanadiovana.
Vao nametraka ny Mint OS X izay mifototra amin'ny Mint 17 Cinnamon aho ary tena feno, ho hitako izay tsy haiko ary hanaraka ny endrika voalaza ao amin'ny lesona aho.
Misaotra betsaka anao nizara azy.
Misaotra anao, tena nanampy ahy tokoa ianao, lasa mahafantatra an'ity rafitra ity izay fantatro avy tamin'ny resaka fotsiny aho ary tena ahazoana aina.
Zavatra iray fanampiny, ho fantatrao ve ny fomba hampiasana ny lakile Lock-num hatramin'ny voalohany?
Misaotra ny asanao sy ny fotoanao. fiarahabana
Alfonso Teijelo dia hoy izy:
Salama: Vao nifindra monina avy tao Ubuntu 12.04 mankany Mint 17, Mate aho. Ny zavatra, tsy hitako ny manova ny endrika ora, hatramin'ny 24 ka hatramin'ny "am-pm". Azonao atao ve ny manazava ahy?
Valiny tamin'i Alfonso Teijelo
Angamba ao amin'ity rohy ity no valiny.
Luis: D dia hoy izy:
mmmm tiako ho fantatra raha homeny ato amin'ity solosaina ity aho
AMD Radeon hd 7520g kilasy discrette
Karatra sary 3090mb
Te hahafantatra aho raha afaka mametraka ireo fonosana deba ubuntu sy ilay rohy misy ny ubuntu
ary tiako ho fantatra raha misy ny mpamily ny karatra video-ko
Valiny tamin'i Luis: D
Haha! Manana be ianao, Tompondaka ... manana be dia be ianao.
Miaraka amin'io masinina io dia manidina i LM!
hugo77 dia hoy izy:
Tena tsara! ny bandy linuxmint dia manao zavatra tsara, ny torolàlana dia tokony ho araka ny tokony ho izy: tsotra, ny ambiny dia vita avy amin'ny manager software, nametraka LM17 Mate aho tokony ho 2 herinandro lasa izay, talohan'ny nampiasako kubuntu, fa tsy zatra izany mihitsy. Mate dia tsy isalasalana fa ny birao tsara indrindra misy, dia tonga lafatra miankina amin'ny fitaovana. Ny mint dia ny distro tiako indrindra ary ny monitor 24 voalohany novidiko ho an'ny mint. Tena tsara!
Mamaly an'i hugo77
S3TC dia hoy izy:
Misy distro hafa ve miaraka amin'ireo codecs tafiditra ao?
Valiny amin'ny S3TC
Zorro dia hoy izy:
Salama, fanintelony aho manandrana amin'ny linux, tamin'ity indray mitoraka ity dia nanandrana ny mint 17 aho ary io no voalohany toa sariaka tamiko, nanaraka ny torolàlana aho ary milamina ny zava-drehetra, misy tsy itovizany amin'ny windows fa tsara, inona ny tena nahagaga ahy indrindra dia ny hoe rehefa avy nandinika fito sy 10 andro nandritra ny efa ho 8 andro aho dia tsy nisy fomba ahafahako mihazakazaka mpanara-maso telo miaraka amina kara-panondrana iray satria ny karatra dia misy vokatra telo, HDMI / dvi / vga, ankoatry ny tsy hoe manana olana amin'izany fotsiny aho. horonantsary raha tsy miaraka amin'ny audio HDMI, raha fintinina, ny zavatra tena nahagaga dia ny nametraka ny mint aho ary nandeha tany amin'ny écran fotsiny aho, nahafahako ny efijery fahatelo, nanao toy izany koa aho tamin'ny audio sy ny zavatra rehetra. handeha, misy tutorial vitsivitsy izay miresaka momba ireo olana ireo, Ny tena marina dia tena afa-po amin'ity linux ity aho ary ho iray indray, ho sambany ary tsy mahalala na inona na inona azoko ny zava-drehetra, lahatsoratra tsara be, ary miala tsiny raha Tena be dia be aho, arahaba
Mamaly amin'ny amboahaolo
gabry_herrera dia hoy izy:
Vao nametraka linux mint aho, milaza fa sambany aho mandroboka ny tenako amin'ny tontolon'ny linux.
Roa andro izay no mbola tsy afaka nametraka ireo mpamily ho an'ny karatra wifi USB ralink-ko.
Misy hevitra ve ?? fa mba tadidio azafady fa tsy ampy ny fahalalana misy amin'ireo faritra ireo aho.
Rehefa manokatra ny mpitantana ny mpamily ary aorian'ny idirana ny teny miafiko dia tsy misy intsony, efijery volondavenona azoko ahenaina na akatona fa tsy misy zavatra hafa.
Tena mankasitraka ny fanampianao aho, satria taorian'ity odyssey ity dia mieritreritra aho hoe mety ve ny miditra amin'ity tontolo ity?
Mamaly an'i gabry_herrera
Salama, manana olana amin'ny linux mint 15 olivia aho, rehefa manomboka ny mpitantana fanavaozana aho dia manome hadisoana ho ahy izao:
W: Tsy nahomby naka http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/restrected/binary-i386/Packages 404 Tsy hita [IP: 91.189.92.201 80] W: Tsy nahomby naka http: // archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/universe/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.201 80] W: Tsy nahomby naka ny http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists / raring-updates / multiverse / binary-i386 / fonosana 404 Tsy hita [IP: 91.189.92.201 80] E: Nisy rakitra fisie tsy nahomby tamin'ny fampidinana azy. Natao ambanin-javatra izy ireo, na taloha nampiasaina kosa.
misaotra betsaka mialoha (araka ny ho hitanao, zazavavikely aho ha)
Toa ny zava-mitranga dia rehefa manandrana manavao izy dia tsy mahita ny adiresy, ka tsy afaka manavao ireo fonosana izay ao amin'io IP io. Manandrama andro iray hafa na zahao amin'ny adiresy hafa ireo fonosana ireo. mahafaly
Te hanandrana ny Mint sy kanelina aho, saingy manana fisalasalana momba ny kinova iza (32/64) manana kahie Samsung R480 miaraka amin'ny I3 - 3gb Ram aho, te hampiasa azy io handrindrana programa. Manantena aho fa omeo toro lalana vitsivitsy aho, arahaba.
David Bishop dia hoy izy:
Salama, fampahalalana tena tsara sy amin'ny an-tsipiriany, ho antsika izay manomboka amin'ny tontolon'ny Linux, ary manandrana miala amin'ny sehatra Windows.
Valiny tamin'i David Obispo
RODRIGO GARCIA dia hoy izy:
HELLO Namana ary tena liana amin'ity rafitra miasa ity ianao te-hampihatra izany ao amin'ny CYBER izay ananako PCS AZY manampy ahy
Valio amin'i RODRIGO GARCIA
Misaotra tamin'ny fampianarana. Miezaka ny manao izay hazavainao eto amin'ny Linux Mint 17 Qiana aho, saingy mangataka tenimiafina foana amiko izy io, toy ny manavao, fa tsy haiko ny teny miafina, nanandrana tamin'ny tenimiafin'ny mpampiasa aho fa tsia, izay ihany no napetrako Rehefa manamboatra, manana tenimiafin'ny mpandrindra default ve ianao? Raha eny dia ahoana no fanovana azy?
azafady, hadisoako izany. Diso tsipelina aho ny teny miafina, io no napetrako rehefa manamboatra miaraka amin'ny solonanarana.
joaquin berrios dia hoy izy:
Tsy afaka nampifandray ny mpanonta canon i320 teo an-toerana aho, ahoana no hataoko?
Mamaly an'i joaquin berrios
Eto ny toerana mety apetraka amin'ireo karazana fanontaniana ireo ary hanampy ny vondrom-piarahamonina iray manontolo hanampy anao: http://ask.desdelinux.net
Lohahevitra: Nijanona tamin'ny teny anglisy ny Firefox ...
Nitranga tamiko tamin'ny tranga hafa io (ilay farany niaraka tamin'i Mint 17 Qiana KDE fotsiny). Raha tsy afa-mandositra ahy izy dia tsy hita ny fomba hanaovana azy amin'ny "Inona no hatao manaraka ...". Namaha azy aho tamin'ny fametrahana ny plugin .xpi avy amin'ny pejy ofisialy. Raha ny amiko
Ny fomba fanaovana izany dia manazava azy amin'ny fomba mazava sy amin'ny antsipiriany amin'ny:
Excelent toy ny mahazatra.
Tsy afaka mametraka AWN amin'ny linux mint 17 quiana ??????????
Mpampiasa mint Linux nandritra ny taona maro aho ... saingy miaraka amin'ny 17 dia miaina olana amin'ny chrome izay tsy nananako tamin'ireo kinova teo aloha ary tsikaritro ihany koa fa somary miadana ... Heveriko fa mitovy ihany no nitranga tamin'ny olona iray hafa ..
Tsy hitako ireo mpamily horonantsary Sis 3 Mirage eo am-baravarankely nahazoako azy ireo, saingy izao rehefa mametraka linux mint aho dia tsy hitako izy ireo ary tsy haiko hoe aiza no ahazoako azy ireo ...
Raha misy manana azy ireo, na mahalala fomba hafa hametrahana ireo mpamily, satria ilay horonan-tsary fotsiny no tsy apetrako. Ny Wifi, ny audio dia mety amiko ...
Ahoana ny fampiasana ny mpanonta EPSON XP-201 mifandray amin'ny kahie amin'ny rafitra fiasa LINUX MINT 17 QIANA?
Ahoana ny fomba fampandehanana ny mpanonta-gazety Epson XP-201 mifandray amin'ny kahie amin'ny rafitra fiasa LINUX MINT 17 QIDA?
Salama, Virginia ny anarako ary vaovao amin'ny mint Linux aho. Te-hanontany momba ireo rakitra audio nakariko tao amin'ny pejy kickass aho tamin'ny alàlan'ny safodrano, manana olana aho fa tsy afaka mihaino azy ireo amin'ny findaiko satria tsy mifanaraka ny endrika audio, nanandrana nanova azy tamin'ny fanovana anarana aho io ohatra tao anaty mp3 ary afaka .mpeg aho nefa tsy nahazo valiny tsara. Raha afaka manoro hevitra ahy ianao, dia ho fanampiana lehibe!
Voalohany indrindra ho hitantsika izany raha manazava ny tenantsika isika. Manomboka miresaka momba ny Linux Mint ianao ary avy eo mandroso amin'ny Cellular. Manana ny olana ao amin'ny Mint na amin'ny Cellular ve ianao? Etsy an-danin'izany, mpeg dia tsy endrika audio, fa video + audio. Ny endrika audio dia .mp3, .ogg, .aac, sns.
Manoro hevitra anao aho handeha any amin'ny Forum na MANONTANY hamaha ny fanontanianao. mahafaly
Salama, nividy solosaina aho izay mitondra ny linux mint quiana ary rehefa te hiditra amina folder amin'ny maha manager manager dia mangataka tenimiafina amiko izy tsy fantatro hoe inona ilay teny miafina. Mieritreritra aho fa efa nitondra azy io avy amin'ny fafrica I don ' t fantaro raha misy afaka manampy ahy amin'izany, misaotra
Salama noe! Tokony hametraka an'ity fanontaniana ity amin'ny serivisy Ask FromLinux anay ianao: ask.fromlinux.net.
Luis Alfredo MOYA dia hoy izy:
Salama, nametraka Linux Mate 13 aho, ary naniry ny hanavao azy io hatramin'ny 17 fotoana fohy ary TSY AZoko, azafady, ny tsy fahalalako, inona no tokony hataoko ary ahoana? Misaotra mialoha raha afaka manampy ahy ianao. LUIS - THE PEELED.-
Valiny tamin'i Luis Alfredo MOYA
Javier Arias dia hoy izy:
Tiako ho fantatra raha miaraka amin'ny linux mint Qiana ianao dia afaka manamboatra programa pic sy programa inona no tokony hampiasaiko amin'izany.
Mamaly an'i javier arias
Salama, lahatsoratra tsara ho an'ireo vao teraka. Vaovao amin'ny tontolon'ny Linux aho, herinandro lasa izay dia nametraka ny kinova 17.1 (Rebbeca) izay zaraiko amin'ny Win7 amin'ny solosainako ary tiako kokoa ny mijery ny kinova Mint, efa namboariko tamin'ny ampahany izy io fa tiako raha any dia fomba rehetra hanamboarana ny menio, hanova ny lokony, ny mangarahara sns. Ny tontolon'ny birao ampiasako dia Xfce, izay heveriko fa tsara.
Eric Moreno dia hoy izy:
Salama, manao ahoana ianao? Tsy dia mila mametraka Linux Mint Xfce "Rebecca" ianao, nametraka divay aho ary nametraka lalao teo (Borderlands) toa mandeha tsara ny zava-drehetra mandra-pahatongan'ny fotoana fampiharana, nolazaina tamiko fa " Tsy hita ny Pixel shader 3.0 ", azonao atao ve ny mitarika ahy raha misy ny vahaolana, amin'ny windows raha tafarina tsara ny lalao.
Valiny tamin'i Eric Moreno
Server1212 dia hoy izy:
Misaotra anao nizara kely ny zavatra fantatrao momba ity rafitra fiasa ity, indrindra ho antsika izay mitady ity lohahevitra ity. Tsara! 🙂
Valiny amin'ny Server1212
Angel Cedeño dia hoy izy:
Salama, vaovao amin'ny tontolon'ny linux aho, nametraka kanelina linux mint 17 aho fa rehefa natomboko dia milaza zavatra toa ahy fa ny CPU dia miasa mihoatra ny ilaina, angamba noho ny lesoka mpamily video, manana vx900 Chrome 9 hd aho , azonao atao ve ny manampy ahy amin'ny alàlan'ny fanondroana toerana ahafahako misintona mpamily hankafizako ny distro misaotra betsaka ...
Valiny tamin'i Angel cedeño
Juvinao dia hoy izy:
Nampiasa Mint nandritra ny adiny roa aho ary hatreto dia mandeha tsara dia tiako izany.
Valio i Juvinao
Tsara, misaotra 😀
Bertholdo dia hoy izy:
Nametraka Linux Mint tamin'ny PC aho niaraka tamin'ny motherboard MSI 760GM (horonantsary Ati 3000 video), maody roa miaraka am-baravarankely.
Nampiakatra fanavaozana ny haavo 2 aho.
Avy amin'ny Update Manager (sary): mety ve ny manavao ny fanavaozana ny haavo 3 ary mijanona ho mavitrika fa ny fonosana taloha dia soloin'ireo vaovao tonga?
Raha vita avy amin'ny Terminal ny asa:
Ireo baiko ve: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade, hanavao ny fanavaozam-baovao rehetra misy ve izy ireo, hatramin'ny Level 5?
Ahoana no ahazoana manao an'io amin'ny Terminal, ka tsy misy fanavaozana ny fanavaozana ny haavo iray fotsiny, ohatra hatramin'ny Level 3 na 2?
Valiny tamin'i Bertholdo
Salama Vao nametraka Linux mint 17.1 aho ary tsy afaka mifandray amin'ny WiFi, toa tsy hita ireo mpamily. Mety misy torolàlana hametrahana azy ireo ve? Misaotra betsaka mialoha.
Alberto Garcia dia hoy izy:
salama panas mila fanampiana aho hametraka mintosx linux mint ary tsy fantatry ny feo aho fa tsy te-hanavao ny mpanjifako fa tsy maniry ny windows 7 fa ny linux mint fotsiny no tiany be dia be dia ahoana no fomba hametrahako mpamily tompona orinasa
Mamaly an'i alberto garcia